Sports Archives - Page 398 of 676 - Zimbabwe Today
After months of intense preparations, Peter De Villiers has named his Sables starting XV for his competitive match in charge and the coach insisted yesterday that tomorrow’s Rugby Africa Gold Cup clash against Morocco is not about any individual but the country. Zimbabwe will begin their Gold Cup Group 1A …
ZIMBABWE senior rugby team coach Peter de Villiers yesterday began his era as Sables coach by including five uncapped players in his team to play Morocco in the opening round of the Rugby Africa Gold Cup, more importantly, the 2019 World Cup qualifier, at Harare Sports Club. BY DANIEL NHAKANISO …
By Ricky Zililo Highlanders’ fans are planning a massive road show to Zvishavane on Saturday for Bosso’s Castle Lager Premier Soccer League match against champions and current log leaders, FC Platinum. Bosso fans in Gweru on their way to Ngezi Bosso are fourth on the table with 29 points, 12 …
By Lovemore Zigara Shabanie Mine have begun the hunt for a new coach following the resignation of Takesure Chiragwi before their league match against Black Rhinos last weekend. Takesure Chiragwi Chiragwi threw in the towel after the Chinda Boys executive imposed new members on the technical committee, which he was …
Spain dramatically sacked coach Julen Lopetegui yesterday and appointed federation sporting director Fernando Hierro — just two days before the team’s opening game at the World Cup. Julen Lopetegui In a surprise announcement on Tuesday, Real Madrid appointed Lopetegui as Zinedine Zidane’s successor to take over after the tournament in …
By Nigel Matongorere Highlanders coach Madinda Ndlovu has come to the defence of goalkeeper Ariel Sibanda following his red card in the 0-1 loss to city rivals Bulawayo Chiefs on Sunday at Barbourfields Stadium. Highlanders goalkeeper Ariel Sibanda Sibanda was sent off by referee Mhaka Magara in the 30th minute …
By Austin Karonga Calls for Dynamos board chairperson Bernard Marriot Lusengo to resign are growing louder by each day with the Harare giants’ former players encouraging the club supremo to follow in Kenni Mubaiwa’s footsteps to pave way for progressive minds to take over. Kenny Mubaiwa (left) hinted on excessive …
By Ellina Mhlanga Three Zimbabwean players progressed to the singles quarter-finals of the third tournament of the International Tennis Federation Old Mutual Futures Series when they won their second round matches yesterday at Harare Sports Club. Top seed Benjamin Lock, second seed Takanyi Garanganga and Mehluli Sibanda remained on course …
By Ellina Mhlanga Zimbabwe’s senior netball team coach Lloyd Makunde has attributed his side’s failure to defend their title at the just- ended Pent Series in Namibia to complacency after they finished second in Windhoek, yesterday. The tournament was played in a round-robin format, with Botswana and Zambia also taking …
By Eddie Chikamhi Zimbabwe Cricket convenor of selectors Walter Chawaguta says the upcoming T20 triangular involving Pakistan and Australia is an opportunity for the national team players to rekindle cricket passion among Zimbabweans still to recover from the World Cup setback. The Chevrons, who have been inactive since the failure …
Page 398 of 676« First...370380390«396397398399400	»	410420430...Last »